Motor na ụgbọ ala na akwụkwọ ahụ aja maka Android | Gam akporosis
Maka ndị hụrụ ụwa moto n'anya, ị ga-ahụ ike akwụkwọ ahụaja kachasị mma na ahịa. Carsgbọ ala ọduọ kacha mma ma ọ bụ foto ndị kachasị dị egwu nke ụgbọ ala ndị a nwere ya kacha mma maka ekwentị gam akporo gị n'efu. Gbanwee ọdịdị nke ekwentị gị n'ụzọ a.
Were na-achọ ụfọdụ akwụkwọ ahụaja nwere ụgbọ ala kacha mma Ferrari ma ọ bụ Porsche? Chọpụta ihe kachasị mma na gallery a ma họrọ ndabere nke kachasị mma na ekwentị gam akporo gị.
Mfe budata ihe kacha mma moto na akwụkwọ ahụ aja n'ihi na gị gam akporo. Hazie ama ma ọ bụ mbadamba nkume nke otu n'ime ụgbọ ndị ị ga-ahụ na nhọrọ ndị na-esonụ nke akwụkwọ ahụ aja maka ndị hụrụ mmanụ ụgbọala.
You chọrọ ịhụ ha akwụkwọ ahụ aja? Miss gaghị agbaghara anyị na akwụkwọ ahụ aja na ngalaba na ị ga-ahụ na njikọ na anyị ka na-ahapụ gị.